प्रतिवेदनमा नेपाल पक्षको असन्तुष्टिः नेकपा विवाद होला समाधान ? ~ Canadanepal.net
प्रतिवेदनमा नेपाल पक्षको असन्तुष्टिः नेकपा विवाद होला समाधान ?
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद लगभग समाधान भएकोछ । पार्टीभित्र देखिएको किचलो समाधान गर्न अध्यक्षद्वयको प्रस्तावमा सचिवालयले अनुमोदन गरेर एउटा कार्यदल बनायो । प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका सदस्यहरु सम्मिलित गराएर कार्यदल गठन गरियो । कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ भने अनुमोदनका लागि अध्यक्षद्वयले सचिवालय बैठक बोलाएका छन् । तर, नेपाल पक्षले असन्तुष्टि जनाएको चर्चा सुरु भएको छ । एक व्यक्ति एक पदको चुरो कुरा नै प्रतिवेदनमा समावेश नभएको नेपाल पक्षको भनाइ छ ।